Raharaha 7 Febroary 2009 : Mbola feno mistery! -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha 7 Febroary 2009 : Mbola feno mistery!
09/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Maro ireo tahirintsary sy horonam-peo ary ampamoaka raha tsy hiresaka afatsy ny fanambarana nataon’ny kolonely Charles Randrianasoavina, nahafahana nanokatra fanadihadiana lalin-dalina kokoa mikasika ny raharaha 7 Febroary 2009 saingy… Tsotra ny antony, fitsaran’ny mpandresy hatrany no nisy teto hatramin’izay tahaka ny nitranga taorian’ny krizy 2002 nifanolanan’ny amiraly Didier Ratsiraka sy Marc Ravalomanana. Samy namono olona sy nandroba fananan’olona ary nanao fanolanana avokoa na ireo voalaza fa milisin’ny AREMA na ireo « Zanadambo » mpomba ny TIM saingy…
Mitovy amin’ny zava-nitranga taorian’ny krizy 2002 mihitsy ny zava-nitranga ny taona 2009. Nojerem-potsiny ny fandrobana ny trano fonenan’ireo mpomba amiraly Ratsiraka nandritra ny « opération hazalambo », toraka izany koa ny vonoan’olona sy fanolanana nataon’ny « Zanadambo ». Nentina teo anatrehan’ny Fitsarana ary nomelohina kosa ireo ACM mpomba ny amiraly ary ireo manamboninahitra mbola nandray baiko tamin’ny fitondrana Ratsiraka, ankoatra ireo mpanao politika mpifanandrina tamin’ny TIM.
Misy horonantsary mirakitra ny adihevitra nataon’ireo mpanao politika mpomba an’i Andry Rajoelina tany amina trano iray eto an-drenivohitra, navoakan’ny France24, andro vitsy mialohan’ny datin’ny 7 Febroary (https://mcmparis.wordpress.com/2014/12/16/le-7-fevrier-de-rajoelina-fanadihadiana-07-febroary-2009-madagasikara/). Ahafahana misintona zavatra betsaka tokoa ity horonantsary ity ary ahafahana manao fanadihadiana lalindalinana kokoa manodidina iny raharaha 7 Febroary izay namoizana ain’olona am-polony maro iny. Mipetraka tokoa ny fanontaniana manao hoe : « Efa paikady nomanina mialoha (avec préméditation) mihitsy ve ny hisian’ny rà mandriaka mba ahafahana miampanga ny mpitondra tamin’izany? ».
Toa efa mamaly sahady io fanontaniana io ny resaka nifanaovan’ireo mpivory voarakitra ao anatin’ilay horonantsary. Manamafy izany ny fahitana ireo olona nitàna andraikitra ambony nandritra ny fitondrana Tetezamita toa an-dry Haja Resampa sy Augustin Andriamananoro izay mpikambana ao amin’ny MAPAR rahateo koa ary anisan’ireo nanatrika ilay « diniky ny mpanjanaka » nataon’i Andry Rajoelina farany teo tany Frantsa. Saingy, teo am-pelatanan’i Andry Rajoelina sy ny forongony ny fahefana taorian’ny 17 Marsa 2009 ka izay heloka nataon’i Marc Ravalomanana sy ny mpiara-dia aminy irery ihany no naroson’ny fitondrana HAT teo anatrehan’ny Fitsarana, nodian-tsy hita kosa ny raharaha 26 Janoary 2009 izay mamatotra tanteraka an’i Andry Rajoelina sy ny ambadika rehetra mikasika ny raharaha 7 Febroary araka ny hita ao anatin’ity horonantsarin’ny France24 ity. Raha ny adihevitra nisy tao mantsy dia toa manamarina ny ampamoaka nataon’ny kolonely Charles Randrianasoviana sy ny praiminisitra HAT teo aloha, Monja Roindefo, nanao hoe « nisy tifitra nifamaly… ». Izany hoe, tsy avy ao an-dapa irery ihany no fiavian’ny bala niteraka ny fahafatesan’ireo vahoaka natao sorona fa nisy koa avy aty amin’ny an-kilany.
Koa raha tena hitady ny marina momba iny raharaha 7 Febroary 2009 iny izany isika dia tokony hatao fanadihadiana ihany koa ireo izay voarakitra ao anatin’ilay horonantsary navoakan’ny France24. Fifandrifian-javatra fotsiny ihany ve io fivoriana io sy ny zava-nitranga teny Ambohitsorohitra ny 7 Febroary? Ny zavatra azo ambara aloha dia mbola feno mistery iny zava-doza nanaovana sorona ny aim-bahoaka iny ary ny tena mamohehitra ao anatin’izany rehetra izany dia ny filazan’ireo olona roa tompon’antoka fa vonona hiara-dia handrodana izao fitondrana izao.
Nanatanteraka hetsika ho fahatsiarovana manokana ny nahafatesan’ny Filoham-pirenena teo aloha, ny Pr. Zafy Albert, ny teo anivon’ny Manda ho an’ny Firaisam-pirenena notarihin-dramatoa Lalatiana Ravololomanana, omaly, teny amin’ny Hotel Panorama, teny Andrainarivo. Notsiahivin’izy ireo tamin’izany ny ...Tohiny